Nofoanan'i Chile ny fihaonana an-tampon'ny APEC, fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny herisetra fanoherana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nofoanan'i Chile ny fihaonana an-tampon'ny APEC, fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny herisetra fanoherana
Ny filohan'i Silia Sebastian Pinera
Nilaza ny filoham-pirenena Chile Sebastian Pinera fa nandray fanapahan-kevitra sarotra ny hanafoanana izany Fiaraha-miasa ara-toekarena Asia-Pasifika (APEC) fihaonana an-tampony, ary koa ny kaonferansa mikambana momba ny toetrandro. Raha ny filazan'ny filoha, ny anton'ny fanafoanana dia ny hetsi-panoherana mahery vaika nanerana an'i Silia.
“Rehefa manana olana ny fianakaviana dia tsy maintsy manokana ny fotoanany amin'ny famahana izany ny ray. Adidin'ny filoha ihany koa ny mametraka ny tombontsoan'ny olony manokana ho ambonin'ny zava-drehetra. Miala tsiny indrindra amin'ny fanapahan-kevitro aho, saingy terena izahay hanafoana ny fihaonambe APEC sy ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro, ”hoy i Pinhera teny amin'ny habakabaka nandritra ny fisehoany tao amin'ny fantsom-pahitalavitra 24horas.
Ny fihaonana an-tampon'ny APEC dia kasaina hatao any Santiago, Chile amin'ny 16 sy 17 Novambra. Ny fihaonana an-tampon'ny APEC dia efa natao tany Santiago tamin'ny 2004. Avy eo dia niaraka tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ny anti-globalista ihany koa ny hetsika. Ny fivorian'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro dia voalahatra mandritra ny tapa-bolana voalohany amin'ny volana desambra.
Famaranana amin'ny Boeing 737 Max: Boeing mpampijaly FAA mba hifehezana ny mari-pahaizana momba ny fiarovana FAA
SAii: S Hotels & Resorts dia namoaka marika fivarotana vaovao